Paul Scholes oo digniin u diray Manchester United ka hor Kulanka Liverpool ” Waa 4-0 qeybta hore Hadii ay Sidaas kula Ciyaaraan Reds | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Paul Scholes oo digniin u diray Manchester United ka hor Kulanka Liverpool...
Paul Scholes ayaa sheegay in Manchester United ay muujisay ‘dagaal weyn’ si ay uga soo baxdo laba gool kuna badiso 3-2, laakiin lakin Digniin ayuu u diray Kooxdiisa Marka ay timaado Kubadooda Qeybta hore.
Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay madax ah daqiiqadii 81 -aad si uu u dhameystiro soo laabashada cajiibka ah ee Champions League , iyadoo natiijada ay United labo dhibcood oo nadiif ah ku hogaamineyso Group F.
Natiijadan ayaa ka yarayn doonta cadaadiskii Ole Gunnar Solskjaer, iyadoo Red Devils laga badiyay afar ka mid ah todobadii kulan ee hore, laakiin Scholes ayaa u baqay kooxdiisii ​​hore ka hor kulankooda Premier League ee Liverpool.
Markii la weydiiyay haddii ay tahay guul mudan in la xuso, Scholes ayaa u sheegay BT Sport: ‘Ma u dabaaldegtaa guul kasta haa? Lakin qeybtii hore runtii aad bay ii murjisay.
Sababtoo ah waxaan u maleeyay in United ay meel walba ku sugantahay qeybtii hore, way kala jabeen. Waxay haysteen labada ciyaaryahan ee qadka dhexe oo iskood u ciyaarayay. ‘
Ciyaaryahankii hore ee United iyo England ayaa hadalkiisa raaciyay: ‘Haddii aad sidaas sameyso kulanka Manchester City ama Liverpool, waxay ahaan lahayd 3-0 ama 4-0 waqtigii nasashada waxaadna ka bixi lahayd ciyaarta mana soo noqonaysid .
Previous articleAxmed Qoor Qoor oo xabsi dhigay odayaal soo jeediyey arrin uusan jecleysan – Xog
Next articleWararka Suuqa Maanta: Labada Manchester oo Barcelona kula Tartamaya Dani Olmo, Heshiiska Youri Tielemans oo istaagay, Iyo Qodobo kale
Tababaraha cusub ee Barcelona Xavi oo daaha ka qaaday qoraal uu...